Pero: Miomana Ho Amin’ny Lalao Olaimpika 2012 Any Londona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2012 8:23 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay momba ny Lalao Olaimpika 2012 any Londona.
Noho izy firenena feno mpankafy fanatanjahantena, misarika ny sain'ireo Peroviana foana ny Lalao Olaimpika. Nandray anjara tamin'ireo Lalao Olaimpika rehetra afa-tsy iray ihany ny firenena (tsy nandray anjara tamin'ny Lalao Olaimpika tamin'ny 1952 tany Helsinki). Raha atambatra dia efatra ireo Peroviana nahazo medaly: iray volamena ary telo volafotsy.
Amin'ity andiany ity, atleta Peroviana 17 no hisolo tena ny firenena any Londona, araka ny marihan'ny [es] blaogin'i Toustodo, izay nampîseho ny sarin'ny atleta tsirairay ihany koa:
[…] amin'ny Lalao Olaimpika any Londona, ireo atleta mahay indrindra any amin'ny firenena no hisolo tena [an'i Pero] amin'ireo fanatanjahantena samihafa. Ity ny delegasiona Peroviana.
Tamin'ny Talata 17 Jolay no nanainga ho any Londona ny vondrona Peroviana, araka ny taterin'ny blaogy Offside [es] :
Tamin'ny 10 Jolay, nilanja ny afo Olaimpika teny an-dàlan'i Oxford i Kina Malpartida, vehivavy tompon-dakan'ny ady totohondry, sy i Gabriel Villarán [es] mpikorisa ambony rano. Nanoratra ny blaogy No apto para adultos (NAPA) [es] hoe :
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay momba ny Lalao Olaimpika 2012 any Londra.